Iimpawu, indlela yokuphila kunye ne-biology ye-thresher shark | Ngeentlanzi
Bathi bobona krebe banezakhono ehlabathini lonke. Nangona kukho iintlobo ngeentlobo zookrebe kuzo zonke iilwandlekazi nakwiilwandlekazi zehlabathi, lo krebe kuthethwa ngaye ngoyena unobuchule. Imalunga nayo tharker ukrebe. Kukwaziwa ngamanye amagama anje ngefeksi ebengezelelweyo, impungutye ye-bigeye kunye nomsila. Igama layo lenzululwazi ngu IAlopias superciliosus. Olunye udidi oluluhlobo lweAlopias kunye nosapho lweAlopiidae.
Kule nqaku siza kutyhila kuwe zonke iimfihlelo zeshark etyholayo kunye neempawu zayo eziphambili.
3 Indawo yokuhlala yoshark kunye noluhlu
5 Ukuzaliswa kwakhona kukakrebe
Ngomnye wookrebe abaneyona mfuno iphezulu kurhwebo kwihlabathi liphela. Kungenxa yokuba inyama yayo inokutsha okungenakuthelekiswa nanto. Ukongeza, ulusu lwabo lusetyenziselwa ukwenza iimpahla zesikhumba.
Ngenxa yokuqhubeka kokuloba kwabantu, i-International Union yoLondolozo lweNdalo (IUCN) uludwelisile olu hlobo lwendalo kwimeko ebuthathaka. Oku kuzingela nokubanjiswa kucingelwa ukuba kuya kususa uninzi lwabemi bakakrebe kwihlabathi liphela.
Iliso leze, eyona nto ibalasele ngolu krebe ngamehlo ayo amakhulu. La mehlo asetyenziselwa ukuwachonga ngokulula kwaye uwahlele. Ngombulelo wamehlo amakhulu banokubona ezinzulwini zolwandle, nokuba alinako ukukhanya. Njengoko sisazi, njengoko sincipha kubunzulu, sifumana isixa esincinci semitha yelanga efikayo kwaye, ke ngoko, kukho izinto ezahlukeneyo ezenziweyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo ukuze zikwazi ukuhlala ezinzulwini. Umzekelo, kukho iintlanzi ezinesikhumba esithambileyo ukuze zikwazi ukumelana noxinzelelo olukhulu oluphantsi kwamanzi.
I-thresher shark inobude obuphakathi kwe-3 kunye ne-4 yeemitha, ngamanye amaxesha ifikelela kwiimitha ezi-5. Ngokwesiqhelo ifikelela kubunzima obuphakathi kwe-160 kg kunye ne-360 kg. Eyona nto ibalaseleyo ngaphandle kwamehlo amakhulu bubungakanani obukhulu bomsila wokugqibela. Kuphela bubungakanani beli xesha lokugqibela elinakho ukubungakanani besiqingatha somzimba walo wonke.
Iipectoral fins, nangona kunjalo, zibanzi kunokuba zide. Ngokuphathelele kumbala wayo, siyabona ukuba kwindawo esiswini inombala omhlophe kwaye wonke umphezulu unombala omdaka mnyama. Lo mbala unokudideka ngokulula ngombala ongwevu phantse omnyama. I-muzzle yayo imfutshane kunye nomhlathi omncinci. Inamazinyo abukhali kakhulu kwaye amancinci. Inxalenye yomhlathi ongaphezulu inokwenziwa ngamazinyo ali-19 ukuya kwangama-24. Okwesibini, ezantsi zinokwenziwa ngama-20 ukuya kuma-24.
Olu hlobo lukakrebe ludada olungileyo kwaye luyakwazi ukukhuphela ngesantya esiphezulu. Inamazinyo amancinci esikhumba. Esi silwanyana akujoliswanga kuso ukuba sihlasele. Ngokuchasene noko, ebantwini akunabungozi.
Indawo yokuhlala yoshark kunye noluhlu
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ezi zilwanyana zifumaneka kubunzulu obuphakathi kweemitha ezingama-30 ukuya kwezili-150. Ngamanye amaxesha kunokubonwa kubunzulu beemitha ezingama-500. Sinokuzifumana zihlala emanzini ashushu kunye neendawo ezipholileyo. Oku kwenza ukuba indawo yokuhambisa ihlanganise phantse umhlaba wonke.
Ukuba siyifumana kwindawo yejografi, sinokuyifumana kwi: I-United States, kunxweme lwaseNew York ukuya eCalifornia, nakwezinye iindawo ezinje ngeHawaii, iCuba, uMzantsi Afrika, iJapan neNew Zealand.
Ngoku makhe sibone ukuba itya ntoni le shark. Ukuba ngookrebe abanezakhono, sijongana nomzingeli. Inendlela eyahlukileyo yokuzingela kunezinye ookrebe. Kungenxa yokuba isebenzisa umsila wayo ukuzingela amaxhoba ayo. Ngale ndlela, iyakwazi ukusebenzisa iglu ngeendlela ezahlukeneyo. Eyokuqala kukubetha umphezulu ngesiphelo, ebangela ukuba iintlanzi ziqale ukuba ngamaqela. Emva koko zijikeleza ngesibetho esomeleleyo esihlasela iqela leentlanzi kwaye ngenxa yoko zinokuzihlasela xa zingenabungozi.
Le ndlela yokuzingela imenza ukuba abe luhlobo lonke ngobuchule obukhulu. Ukutya kusekwe ikakhulu kwi-tuna, ii-crustaceans, i-octopus, oononkala, iskwidi kunye nezinye iintaka zolwandle ezikwaziyo ukuzingela. Ezi ntaka ziyantywila ziye kuzingela ezinye iintlanzi. Ookrebe bayakwazi ukubazingela ngaphandle kwengxaki.
Ukuzaliswa kwakhona kukakrebe
Makhe sibone yonke into ekhoyo malunga nokuzala kwakhona lo krebe. Ukuzaliswa kwakhona kwezi zilwanyana akuxhomekekanga kwixesha lonyaka esikuyo okanye kwiinyanga zonyaka ukuze sikwazi ukuzala. Ke ngoko, banokuyenza nangaliphi na ixesha lonyaka. Oku kubanika inzuzo enkulu yokuzala kwaye, ngenxa yale modeli yokuzala, isenokungabikho kwimeko embi yolondolozo kunanamhlanje.
Ngaphambi kokwenza isenzo sokutshatisa, kufuneka ukuba babe sele begqibile ukukhula ngokwesondo. Le minyaka iyahluka ngokuxhomekeke ekubeni yindoda okanye ibhinqa. Abanye babo banokufikelela kuyo beneminyaka emi-3 ubudala, ngelixa abanye banokufikelela kuyo nge-9 leminyaka. Konke kuxhomekeke emzimbeni womntu ngamnye kunye nophuhliso lomntu.
Njengeentlobo ezininzi zookrebe, ukuveliswa kwayo kungohlobo lwe-ovoviviparous. Oku kuthetha ukuba amancinci akhula ngaphakathi kwimazi kodwa ngaphakathi kweqanda kwisithuba seenyanga ezili-9. Inye inyani enomdla kukuba ezi krebe, zihlala ngaphakathi ezindlini, zihlala zitya amaqanda angakhange achunyiswe. Abasetyhini banokuba phakathi kwababini ukuya kwabane ku-2 ngexesha ngalinye lokuzalisa.
Ukuba sesinye sezona ntlobo zifunwa ngabantu, zombini inyama yaso nolusu lwayo, isoyikiswa. Isobho se-Thresher shark fin sifunwa kakhulu phakathi kobutyebi obuninzi bokutya. Kuqikelelwa ukuba kule minyaka ili-15 idlulileyo phantse iipesenti ezingama-80 zabemi behlabathi bazo bonke ookrebe basuswe.
Ayinabungozi kwaphela kubantu abahlukeneyo njengoko ineentloni. Kunzima ukusondela kubo kwaye abanangqumbo kwaphela nezinye izilwanyana ezinkulu kunabo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga noshark onje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Shresher ukrebe